Madaxwayne Erdogan oo si kulul uga Hadlay dagaalka Armenia iyo Azerbaijan , Muxuu Wacad ku maray ? | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Sep 29, 2020 - Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Armenia inay si deg deg ah uga baxaan dhulka Azerbaijan ee ay soo galeen, si loo dhameeyo dagaalka u dhaxeeya labada dal.
Ugu yaraan 21 qof ayaa Isniintii lagu dilay maalinkii labaad ee dagaalka ka dhashay gacan ku haynta gobolka Nagorno-Karabakh, oo ah gobol ku yaalla dalka Azerbaijan, balse ay degan yihiin dad Armenian ah.
Ankara ayaa ballan qaaday inay taageero buuxda siin doonto Azerbaijan.
Waxa uu sheegay in kooxda Minsk – oo ay hogaamiyaan Russia, France iyo Mareykanka, islamarkaana dhex-dhexaadinayey Armenia iyo Azerbaijan – ay ku guul-darreysteen inay xiisadda xaliyaan muddo 30 sano ah.
“Azerbaijan waa inay arrintan gacmaheeda ku xalisaa, haddii ay jeceshahay iyo haddii kaleba,” ayuu yiri Erdogan. “Turkey waxay sii wadi doontaa inay garab taagnaato Azerbaijan, ayna ku taageerto wax kasta oo ay awooddo.”